နိုင်မြင်းကို လောင်းနေကြပြီ ( Henry Aung ) — HiveHustlers
နိုင်မြင်းကို လောင်းနေကြပြီ ( Henry Aung )
kachinhenry in HIVE-MYANMAR • 15 days ago
မင်္ဂလာပါ​။ ကျွန်တော့ အနေဖြင့် Hive Platform ပေါ်တွင် နိုင်ငံရေး နှင့် ဘာသာရေး အကြောင်း ရေးသားခြင်းအား အထူးပင် ရှောင်ကြဉ် ခဲ့ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ထို အကြောင်းအရာ နှစ်မျိုးက ထိလွယ်ရှ လွယ်သော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံရေး အကြောင်း လုံးဝမရေးဘူးလားဆိုတော့ ရေးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အခြားနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံရေး အကြောင်း ( ဥပမာ ဟောင်ကောင် အရေးအခင်း ) များသာ ရေးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အကြောင်း အဘယ့်ကြောင့် မရေးရသနည်း ဆိုသော် မရေးတတ်လို့ဟူ၍သာ ပြန်ဖြေရပါလိမ့်မည်။
ရေးရလျင်လည်း ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှန်ထောင်း ၊ ပက်လက်အိပ်ကာ တံတွေး ရသကဲ့သို့သာ ရှိမည် ဖြစ်သော ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ယခု အကြောင်းတော့ အနည်းငယ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ကြောင့် ကျွန်တော့ မိတ်ဆွေများလည်း သိချင်လိမ့်မည် ထင်သောကြောင့် ရေးပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယခုတလော ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ဇတ်ရှိန်က အတော်လေးကို မြှင့်လာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော February လမှစ၍ ကျွန်တော်တို့ UN ကို မျှော်ခဲ့ကြပါသည်။ UN ကလည်း တံခါးပိတ်လိုက် အစည်းဝေးလုပ်လိုက် တံခါးဖွင့်လိုက် အစည်း​ဝေးလုပ်လိုက် ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်ဖြင့်။ ဤသည်က သံတမန်ရေးရာ ဖြစ်ပါသည်။
သံတမန်ရေးရာတွင် NUG က အသာစီးရနေသော်လည်း UN တပ်အား မြန်မာပြည်ထဲသို့ ဝင်လာအောင် မတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။ မြန်မာလူငယ်တို့ မည်သူ့ကိုမျှ မမျှော်တော့ပါ ကိုယ့်အားကိုယ် ကိုးကြရပါတော့သည်။ ဤသည်က ပြည်တွင်းအခြေအနေများ ။
ထို့နောက် အာဏာသိမ်းသူတို့ နိုင်ငံတကာ မဟုတ်တောင် အရှေ့တောင်အာရှတွင် မျက်နှာ ပွင့်နိုင်ရန် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတော့သည်။ သို့သော် အချည်းအနှီးသာ။ အာဆီယံ အစည်းဝေးတက်ခွင့်မရ ။
ယခု နောက်တကြိမ် စိနတိုင်းက ကြိုးစား၍ စေ့စပ်ပေးသော်လည်း အာဆီယံ ကလက်မခံတော့ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အာဏာသိမ်းသူတို့ သဘောတူညီထားသော အချက်၅ ချက်တွင် တချက်လေးမှ မလိုက်နာထား၍ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စိန ဦးဆောင်သည့် အာဆီယံ အစည်းဝေးပွဲလည်း တက်ခွင့်မရ။ နိုင်ငံတကာတွင် မျက်နှာမပြဝံ့သည့် အခြေအနေသို့ ကျရောက်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ဤ အခြေအနမျိုးတွင် အာဏာ သိမ်းသူတို့ကလည်း သူတို့ အဆင်ပြေနေကြောင်း ဟန်ဆောင်ရန်အတွက် စကားများ ကျွံ့ထွက်လာပါတော့သည်။ " မည်သည့်နိုင်ငံမှ အဖက်မလုပ်လည်း မြောက်ကိုးရီးယား ပုံစံဖြင့် သွားမည် " ။ ဤစကားသည် အာဆီယံ ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းအား တိုက်ရိုက်ထိမှန်စေသော စကား ဖြစ်ပါသည်။
အာဆီယံကလည်း မိမိတို့ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် မြောက်ကိုးရီးယား ကဲ့သို့သော " လုံးဝအာဏာရှင် စနစ် " နောက်တခု ပေါ်ပေါက်လာမည်ကို မလိုလားသလို အာဆီယံအတွက်လည်း အရှက်ရဖွယ်ရာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အာဏာသိမ်းသူတို့ထံမှ ထိုကဲ့သို့သော စကားကျွံလာပြီးနောက်တော့ အာဆီယံကလည်း အလျှော့ပေးဆွေးနွေးမည့်လမ်း မမြင်ရတော့ပါ။
နောက်တခုက အဏာသိမ်းသူတို့သည် ငွေရေးကြေးရေး ပြသနာမရှိ စင်္ကပူ တွင် အပ်ထားသော ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံ ရှိသည်ဟူသော စကားကျွံ့ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တော့ စင်္ကပူရှိ ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံ ထိန်းချုပ်ခံလိုက်ရပါတော့သည်။
အထက် တွင် ဖေါ်ပြခဲ့သော အရာများမှာ February လမှ စတင်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံရေး ၏ Phase -1 ဖြစ်ပါသည်။ ယခု Phase-2 စလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ NUG ကငွေတိုက်စာချုပ် ထုတ်ရောင်းမည့် သတင်းထွက်လာသည်မှာ လပိုင်းခန့်သာရှိပါသေးသည်။
ကျွန်တော် စိတ်အဝင်စားဆုံမှာ ဤ ငွေတိုက်စာချုပ်က online မှ ရောင်းချမည်တော့ သေချာသည် သို့သော် NUG က မည်သည့် နိုင်ငံ၏ ဘဏ်အကောင့်ကို သုံးမည်ဆိုသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ထင်ထားသည်က NUG အားအသိမှတ်ပြုထားသော Czech Republic ကဲ့သို့သော နိုင်ငံတွင် ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်မည်လား သို့မဟုတ် မြန်မာတို့အား အထူး အားပေးနေသော တောင်ကိုးရီးယား နိုင်ငံတွင် ဖွင့်မည်လား ဟူ၍ ထင်ထားခဲ့ပါသည်။
အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ ဥရောပ ရှိတနိုင်ငံ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ထင်ထားခဲ့ပါသည်​။ ယခုတလော သတင်းများတွင် CIA လက်ထောက် အရာရှိ ထိုင်းနိုင်ငံ သို့ရောက်လာကာ ထိုင်းဝန်ကြီးနှင့် ၄၅ မိနစ်ခန့် အစည်းဝေးလုပ်သွားကြောင်း ဖတ်မိလိုက်ပါသည်။
စိနကလည်း ယနေ့လုပ်သော အာဆီယံ စိန အစည်းဝေးတွင် အာဏာသိမ်းသူအား အပါမခေါ်နိုင်ခဲ့ပါ။ လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ခန့်က စင်္ကပူ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးက မြန်မာပြည်သူတို့ လုပ်စရာ ရှိသည်အား လုပ်ကြပါရန် အားပေးစကား ပြောလာခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ NUG က ငွေတိုက်စာချုပ် ထုတ်ရောင်းပါသည်။
ကျွန်တော် အလွန်သိချင်နေသော မည်သည့် ဘဏ်တွင် အထိုင်ချသနည်း ဆိုသည့် အကြောင်း စုံစမ်းလိုက်တော့ အတော်ပင် အံ့ဩသွားပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့ စင်္ကပူ နိုင်ငံရှိ RHB bank ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ဘဏ်သည် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ Corporation ကြီးများ ကုမ္ပဏီ ကြီးများ၏ အကောင့် ဖွင့်ရာ ဘဏ်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။ စင်္ကပူကတော့ နိုင်မြင်းကို စ လောင်း လိုက် ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အာဆီယံ နိုင်ငံများတွင် စင်္ကပူက NUG အား အတိအလင် အသိအမှတ်ပြုလိုက်သည့် သဘောပင်ဖြစ်ပါသည်။ အထက်တွင် ကျွန်တော် ဖေါ်ပြပေးခဲ့သည့် အတိုင်း Phase -2 တွင် ဆက်ရန် များစွာရှိနေသေးသော်လည်း စင်္ကပူက တော့ ဤပွဲတွင် မည်သူနိုင်မည် ဆိုသည်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံရေးတွင် တိုက်ဆိုင်သည်ဟူ၍ မရှိသလို ရန်သူ မိတ်ဆွေဟူ၍ လည်းမရှိပါ။ မိတ်ဆွေသည် အချိန်မရွေး ရန်သူ ဖြစ်သွားနိုင်သလို ရန်သူသည်လည်း အခြေအနေ အချိန်ခါကြောင့် မိတ်ဆွေဖြစ်လာတတ်ပါသည်။
22/11/2021 - Monday - 18;02Pm
15 days ago in HIVE-MYANMAR by kachinhenry
နိုင်နေပါပီလေ နဲနဲကြိုးစားရန်တော့လိုသေးတာပေါ့။ !PIZZA
kachinhenry 14 days ago
ဒါပေသိ တက်မထောင်မိဖို့ အရေးကြီးတယ်... ပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူး။ !PIZZA. !LOL. !LUV
sayalu 15 days ago
သတင်းကောင်းပဲဗျို့ ၊ သို့သော်လည်း မတူညီတဲ့ ပြည်နယ်အစုအဖွဲ့တွေကြား ဘုံသဘောထား ကျလာဖို့ nug ရုန်းကန်ရဦးမယ် လို့ မြင်မိတယ် - !LOLZ
အဲဒီတခုတော့ အတော်လေးကြိုးစားရလိမ့်မယ်။ အခုက အရေးကြီးတာ အရင်လုပ်နေကြရတာဆိုတော့.... အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးတခု ရေးသင့်မရေးသင့် စဉ်းစားနေတာ...!PIZZA. !LOL. !LUV
naythan 15 days ago
နိုင်ကို နိုင်ရမည် အကို
ဒါပေသိ တက်မထောင်မိဖို့ အရေးကြီးတယ်... ပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူး။ !LOL. !PIZZA. !LUV
nyimwa 15 days ago
အစကတည်းက တို့နိုင်မြင်းက တကောင်တည်းပါ သူတို့မမြင်ကြလို့။ !LOLZ
နိုင်ငံရေးဆိုတော့ အကဲခတ်ရသေးတားကိုး...!PIZZA. !LOL. !LUV
donjaun 15 days ago
နိုင်မြင်းကို သူတို့ သိသွားကြပြီ
uthantzin 15 days ago
ဟန်ချက်တွေ ကတော့ ကောင်းလာပါပြီ။အားတက်စရာ များများ တွေ့ပြီး မြန်မြန်အောင်မြင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျှက်ပါ...!PIZZA
အစ်ကိုကလည်း ဆုတောင်းလျက်ပါ။ ဟန်ချက်ပျက်မသွားဖို့ အရေးကြီးတယ်။ !PIZZA. LOL. !LUV
Thanks You.... !PIZZA.
You're welcome @kachinhenry, that's welcome 😊👍 We wish youahappy buzzy week and haveagood !PIZZA ! 😄
ashinn 15 days ago
အမလေး ဒီစာဖတ်လိုက်တာ အားတေတောင်ရှိသွားတယ် ဝယ်ဖို့ငွေစုလိုက်ပါဦးမယ်ရှင့်🥰🤑
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုပြီး ၅ / ၁၀ ယောက် တတွဲ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ !PIZZA. !LOL. !LUV
@ashinn, I sent you an $LOLZ on behalf of @kachinhenry
golden.future 15 days ago
ဟုတ်ပါ့ ချက် ဘဏ်မှာလို့ပဲ အများပြောနေကြတာ။ စရောင်းတဲ့နေ့ကြမှပဲ စလုံးဘဏ် ဖြစ်နေ။
ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော သတင်းကောင်းလို့ပဲ ပြောရမယ် ထင်ပါတယ်။
သတင်းကောင်းပါပဲ... ဒါပေသိ ရည်မှန်းချက် ပြည့်အောင်တော့ အတော်ရုန်းကန်ရမယ်။ အတိုးမဲ့ bond ဆိုတော့ အခြားနိုင်ငံသားတွေ ဝယ်ဖို့ စိတ်မဝင်စားဘူးလေ... အတိုးထည့်ပေးရင်တော့ ခဏလေး ပြည့်လောက်တယ်။ !LOL. !PIZZA. !LUV
htwegyi 15 days ago
ဟုတ်တယ် စင်္ကပူ က မည်သို့ပြောရမလဲ
ပွဲစားနိုင်ငံ ကိုးလို့... !PIZZA. !LOL. !LUV
nweoomon 15 days ago
အပင်မြင့်လာလေ ... လေတိုက်ခံရလေလေ မို့.... သူတို့က လေတိုက်တာလောက်ပဲ တတ်နိုင်တော့တာကိုး...!PIZZA. !LOL. !LUV
@kachinhenry(12/20) tipped @naythan (x1)
ဖတ်ရတာ အားရှိပါးရှိပဲ။ သူတို့အထိနာနေပြီဆိုတာ
သူတို့ထုတ်လာတဲ့ ဥပဒေကို ကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ့ပက် ဆိုသလို
လျှောက်လုပ်တော့မယ် ထင်တယ်.... !PIZZA